တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်ပါတီကော်မတီ၊ အတွင်းရေးမှူး H.E. Mr. Chen Hao အားလက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၈
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်ပါတီကော်မတီ၊ အတွင်းရေးမှူး H.E. Mr. Chen Hao အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ – ၄
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်ပါတီကော်မတီ၊ အတွင်းရေးမှူး H.E. Mr. Chen Hao အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန်၌လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ထွန်းထွန်းနောင်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက် ရောက်ကြပြီး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ် ပါတီကော်မတီ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ယူနန်ပြည်နယ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံနှင့် တပ်မတော် နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မာအောင် ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံ အကြားခိုင်မာသည့်ကုန်သွယ်မှုဖြစ်စေရေး၊ နယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ နယ်စပ် ဒေသတွင် နေထိုင်သည့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပညာရေးကဏ္ဍ၊ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြည်သူများမှ ရွေးချယ်သည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်၌ လျှောက်လှမ်း နေမှုအခြေအနေများ၊ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်အတွက် ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများနှင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြားချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များ အပြန်အလှန်သွားရောက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ အား အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်ပါတီကော်မတီ၊ အတွင်းရေးမှူး H.E. Mr. Chen Hao တို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများအပြန်အလှန် ပေးအပ်ပြီး တက်ရောက်လာကြသူများနှင့် အတူ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
နပွေညျတျော၊ ဒီဇငျဘာ – ၄
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ ယူနနျပွညျနယျပါတီကျောမတီ၊ အတှငျးရေးမှူး H.E. Mr. Chen Hao အား ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဇယြောသီရိဗိမာနျ၌လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး ထှနျးထှနျးနောငျ၊ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျ ရောကျကွပွီး တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ ယူနနျပွညျနယျ ပါတီကျောမတီ၊ အတှငျးရေးမှူးနှငျ့ အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာတရုတျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Hong Liang နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ ယူနနျပွညျနယျ၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုအခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံနှငျ့ တပျမတျော နှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုပိုမိုတိုးတကျခိုငျမာအောငျ ဆောငျရှကျနမှေု အခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံ အကွားခိုငျမာသညျ့ကုနျသှယျမှုဖွဈစရေေး၊ နယျစပျဒသေလုံခွုံရေး၊ တညျငွိမျအေးခမျြးရေး၊ နယျစပျ ဒသေတှငျ နထေိုငျသညျ့တိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြား ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ ပညာရေးကဏ်ဍ၊ ကနျြးမာရေးကဏ်ဍနှငျ့ လမျးပနျးဆကျသှယျမှု ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးကဏ်ဍမြားတှငျ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျ ရေး၊ မွနျမာနိုငျငံတှငျပွညျသူမြားမှ ရှေးခယျြသညျ့ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီလမျးကွောငျးပျေါ၌ လြှောကျလှမျး နမှေုအခွအေနမြေား၊ ထာဝရငွိမျးခမျြးရေးရရှိရနျအတှကျ ဆောငျရှကျနမှေုအခွအေနမြေားနှငျ့ တပျမတျောနှဈရပျအကွားခဈြကွညျရေးခရီးစဉျမြား အပွနျအလှနျသှားရောကျရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြား အား အပွနျအလှနျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျနှငျ့ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ ယူနနျပွညျနယျပါတီကျောမတီ၊ အတှငျးရေးမှူး H.E. Mr. Chen Hao တို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြားအပွနျအလှနျ ပေးအပျပွီး တကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့ အတူ စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။
နိုဝင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၇ Admin 0
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) မိသားစုများ၏ သတ္တမအကြိမ် မဟာဘုံကထိန် အလှူတော်မင်္ဂလာ အခမ်းအနားကျင်းပ